InterfaceLIFT, tranokala misintona sary miavaka mahavariana | Avy amin'ny mac aho
InterfaceLIFT, tranokala misintona sary miavaka mahavariana tanteraka
Betsaka ny mpampiasa tadiavinao hatrany Wallpaper mahavariana apetraka amin'ny Mac, Ka anio dia handao anao tranonkala iray maimaimpoana tanteraka izahay izay manome anay wallpaper vitsivitsy ho an'ny ekipanay.
Maimaimpoana daholo ireo sary an-tsary ireo ary azontsika atao ny misintona azy ireo isaky ny mila vahaolana hafa isika. Ho fanampin'ny fananana safidy hampiasa ny sary mahafinaritra an'ny rafitra fiasa macOS, ny fiaviantsika izay anaovantsika rehefa misintona sary amin'ny Mac isika, zava-dehibe ny fananana tranokala toy ny InterfaceLIFT izay manolotra antsika fiaviana isan-karazany, maimaimpoana ary tena mahavariana.
Tsy misy zavatra betsaka holazaina momba ity tranokala ity ary azo antoka fa maro aminareo no efa mahalala izany noho ny habetsaky ny sary atolotra ho an'ireo mpampiasa izay maniry manova azy matetika. Fantatsika fa misy fampiharana sy safidy mahaliana hahazoana wallpaper, fa amin'ity tranga ity ny tranonkala InterfaceLIFT dia safidy tena tsara ho an'ireo rehetra te hanova ny endrik'ilay Mac.
Azavao fa ny famahana farany ambony indrindra ny sary ampiasanao dia mahatratra ny famahana ny 4K, fa koa raha tsindrio ny bokotra milatsaka dia afaka mahita ny habeny ho an'ny iPhone, iPad, Kindle ary fitaovana hafa isika hatrizay Izy ireo dia manana fanapahan-kevitra ho an'ny karazana efijery rehetra. Aza misalasala ary ampidiro ato amin'ity rohy ity ihany ny tranonkala hahitanao ny sary an-tsaina tianao indrindra na ireo tianao indrindra ary sintomy eo noho eo izy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » InterfaceLIFT, tranokala misintona sary miavaka mahavariana tanteraka
Maria bustillos dia hoy izy:
Betsaka amintsika no maniry manova ny sary an-tsehatra matetika mba hanazava ny andro sy hanome endrika vaovao ny birao birao. Androany dia manolotra an'ity lisitr'ireo tranonkala 10 tsara ity izahay hampidina ny rindrambaiko desktop. Hahita lohahevitra sy fanapahan-kevitra marobe izy ireo. Deviant Art Flickr InterfaceLift Vladstudio Fanaratsiana an-tsary an'i Wallcoo Desktop tsotra Wallpaper Wallpaper tsara indrindra tranokala MWallpapers.
Valiny tamin'i Maria Bustillos
AirPods manavao ny kinova 3.5.1 ary tsy afaka manampy azy ianao
Ny valiny ara-bola dia miresaka momba #PodcastApple 8x20